Senetarkii magaalada Garissa Maxamed Yuusuf Xaaji oo geeriyooday - Awdinle Online
Senetarkii magaalada Garissa Maxamed Yuusuf Xaaji oo geeriyooday
Waxaa magaalada Naiorbi ee dalka Kenya ku geeriyooday Maxamed Yuusuf Xaaji oo kamid ahaa siyaasiyiinta Soomalida ee dalka Kenya.
Maxamed Yuusuf Xaaji oo ah senetarka ismaamulka Gaarisa, kana tirsanaa aqalka saree e dalka Kenya ayaa waxa ageeridiisa BBC-da u xaqiijiyay xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo isna laga soo doorto magaalada Gaarissa.
Marxuumka ayaa horay usoo noqday wasiirkii difaaca ee dalka Kenya xilligii madaxweyne Mwai Kibaiki, wuxuuna sidookale soo noqday barasaab gobol iyo xildhibaankii deegaanka Ijara ee ismaamulka Gaarisa.
Maxamed Yuusuf Xaaji ayaa ah aabaha dhalay agaasimaha guud ee dacwad oogaha dalka Kenya, dalka Kenya, Nuurdiin Xaaji.
Previous articlePuntland oo weli ku adkeysaneysa in Shirka doorashooyinka uu ka dhaco Muqdisho
Next articleAkhriso: Maxay tahay sababta uu u baaqday shirkii uu ku baaqay Farmaajo?